China Steel ụba Class factory na-emepụta | Zhenyuan
Ogwe ihe owuwu ígwè bụ otu n'ime ụdị ihe eji ewu ụlọ, nke kachasị na-eji ígwè.
Ihe owuwu a nwere oke ike, oke onwu na ike siri ike, ya mere o kwesiri nke oma maka iwu ulo ogologo na nke di elu na nke di ike. Ihe bu ezigbo elastomer nwere ezigbo homogeneity na isotropy, nke kwekọrọ na isi echiche nke igwe na-arụ ọrụ izugbe. Ihe a nwere ezigbo plastic na ike, nwere ike nwee nnukwu nrụrụ, ma nwee ike iburu ibu dị ike.
A na-ejikarị ya eme ihe na hotels, ụlọ ọrụ ọfịs, ụlọ ọrụ ọfịs na ụlọ ndị ọzọ dị elu ma dị elu ...
Ngwongwo ihe eji eme ulo bu uzo ohuru nke ulo oru, nke mebiri site na ahia ulo oru n'etiti ulo oru ulo oru ulo oru, ulo oru ihe omuma na ulo oru mmeputa ihe, ma buru usoro ulo oru ohuru, nke bu usoro ihe eji eme ihe n 'ulo nke ndi mmadu noo n’ile.
E jiri ya tụnyere ụlọ ndị e ji eme ihe ọdịnala, ụlọ ndị e ji ígwè rụọ dochie ihe siri ike na efere ígwè ma ọ bụ nkebi akụkụ, nwere ike dị elu na nguzogide ala ọma jijiji ka mma. Ma n'ihi na akụrụngwa nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ mepụtara, ntinye saịtị, wee si otú a belata oge ahụ. eji reusable eji ígwè, nwere ike belata oke mkpofu ahihia, nchedo gburugburu ebe obibi na-acha akwụkwọ ndụ, ya mere a na-ejikwa ya n'ụwa niile, na-etinye ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ obodo.
Ka ọ dị ugbu a, ntinye nke igwe nchara na ụlọ ndị toro eto ma dịkwa elu na-aghọwanye ndị tozuru etozu, jiri nwayọ nwayọ bụrụ teknụzụ ụlọ ndị bụ isi, nke bụ ntụzigharị mmepe ọkaibe nke ije.
Lọ a na-ebu ígwè bụ ụlọ nwere ihe owuwu nke e ji ígwè rụọ. Ogwe, ogidi, trusses na ihe ndị ọzọ a na-ejikarị akụkụ ígwè na ígwè eme ihe owuwu na-ebu ibu. N'elu ụlọ, ala na mgbidi, ọ na-etolite dum. ụlọ.
Building ngalaba na-ezo aka na-ekpo ọkụ akpọrepu akpụ Angle, ọwa, M - doo, H - doo na ígwè anwụrụ, wdg The ụlọ na-etolite amị Ọdịdị site na ya akụrụngwa na-akpọ ngalaba nchara Ọdịdị ụlọ. Ọzọkwa na mpempe akwụkwọ ígwè oyi akpọrepu akpụ. , winding ma ọ bụ na-enweghị winding n'akụkụ nke ọdịdị L, nke yiri U, Z na nke tubular nke nwere obere mgbidi, yana ya na obere nchara dị ka nchara nchara, ogwe igwe na ihe ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ na-ebu ibu , nke a na-akpọkarị ụlọ mgbatị ụlọ ọkụ.E nwere ụlọ nrụrụ mgbatị, ọ bụkwa nke ụlọ ígwè.
High ike na-agbanwe modulus nke ígwè, edo ihe onwunwe, mere nke ígwè Ọdịdị plasticity na ike, elu nkenke, mfe echichi, elu ogo ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ngwa ngwa-ewu.
Site na mmepe nke Times, teknụzụ dị ugbu a na akụrụngwa, ngwongwo ígwè dị ka ụlọ na-ebu ibu, adịruola mgbe zuru oke ma tozuru oke, bụrụla ezigbo ihe owuwu ụlọ .......
Ndabere ụkpụrụ ụlọ
Nhazi nhazi ugwu
Nhazi ụdị ọnụ ụlọ
Atụmatụ ntọala nke ikpo okwu
Structural 3D imewe nlereanya
Nke gara aga: Ngwa ngwa ụlọ ọrụ
Osote: Iwu mmiri na ọkụ eletrik atụmatụ
Nkọwapụta Nhazi Steelgwè
Nrụpụta Portgwè Portal